Iiplagi eziPhambili zeWordPress kwiiSayithi zoShishino Martech Zone
Okunye ukuthandwa kweplugin ye-WordPress kuye kwaqhutywa ngofakelo lomntu okanye olusekwe kubathengi. Kuthekani ngeshishini? Sihlanganise uluhlu lwethu iiplagi ezithandwayo zeWordPress esikholelwa ukuba zenza ukuba abasebenzisi beshishini benze imali kumxholo wabo kwaye baqhube iziphumo ngeenjini zokukhangela kunye nemidiya yoluntu, ngeselfowuni, ithebhulethi okanye idesktop… kwaye badibanise ngokupheleleyo izicwangciso zabo zentlalo kunye nevidiyo.
Emva kokuba ndiphuhlise iiplagi ze-WordPress ezidumileyo, ndihlala ndinomdla wokufumana kunye nokwabelana ngeeplagi ezenza umsebenzi omangalisayo wokuphucula, ukukhulisa, kunye nokwenza imisebenzi ngaphakathi kweWordPress. Iiplagi ze-WordPress zombini ziyintsikelelo kunye nesiqalekiso, nangona kunjalo.
Imiba yePlugin yeWordPress
Iiplagi ngamanye amaxesha ziyahamba imingxunya yokhuseleko ukuba abahlaseli banokusebenzisa ithuba lokutyhala i-malware kwindawo yakho.
Iiplagi zihlala zingasebenzisi ngokupheleleyo Imigangatho yokufaka iikhowudi kwiWordPress, Yongeza ayimfuneko ikhowudi enokubangela eminye imicimbi.
Iiplagi zihlala zihlala akhuliswanga kakuhle, kubangela idatha yangaphakathi okanye imiba yokusebenza.
Iiplagi zihlala zihlala ayixhaswa, kukushiya uxhomekeke kwikhowudi enokuthi ikhule iphelelwe lixesha kwaye inike indawo yakho indawo engenamsebenzi.
Iiplagi zinokushiya iitoni idatha kwiziko ledatha yakho… Nasemva kokuba uyikhuphile iplagi. Abaphuhlisi banokuyilungisa le nto, kodwa bahlala bengazikhathazi ngayo.
Ndiyakholelwa ukuba i-WordPress inyukile ngenene, iphelisa iiplagi ezindala kwimboniselo yazo yokugcina iplagi kwaye yamkele iiplagi ezintsha ngesandla ukuqinisekisa ukuba azibhalwanga kakubi. Kuba iimeko ze-WordPress ezizimeleyo zikuvumela ukuba ufake nayiphi na iplagi, nangona kunjalo, kuya kufuneka wenze umsebenzi wakho wesikolo okanye ufumane isibonelelo esithembakeleyo sokwenza izindululo.
Ukongeza, uninzi lwee Uluhlu lwePlagi zeWordPress eziGqwesileyo zilungiselelwe iblogger yobuqu kwaye azigxininisi kumashishini kunye nemizamo yazo eyodwa ekuyileni nasekuphuhliseni izicwangciso zomxholo ezinceda ukukhuthaza ishishini labo. Kwakhona, sonke siyayazi loo nto eyona ligama elizimeleyo… ngoko ke sizakuhamba nesithandwa ukohlula izindululo zethu.
Apha ngezantsi kukho iseti ezanyiweyo neyinyaniso Iiplagi zeWordPress zeshishini esikholelwa ukuba zezona zibalaseleyo kwindalo enkulu yeeplagi zeWordPress.
Eyona Plugin ye-WordPress yeeBackups zeSayithi kunye nokufuduka
Ukufuduka kweWP -Kukho iiplagi ezininzi ezintle kakhulu phaya zokwenza ii-backups ezilula kunye nokufuduka, kodwa xa ufuna ngokwenene ukufumana igranular ukuba zeziphi iifayile, imixholo, kunye neeplagi ezifakwe kwi-backup okanye ukufuduka, le plugin idlula konke obekulindelekile. Kananjalo, ungazihambisa ngokulula iisayithi phakathi kwenye - nokuba ujonge phantsi iimvume apho iisayithi zinokutyhala okanye zitsalele kwenye.
Iiplagi ezigqwesileyo zeWordPress zokubandakanya kunye nokuguqula abatyeleli
UmcimbiON -Ukuba ujonge ukongeza ngokulula imisitho, kunye nobhaliso kwiindawo ezininzi zeshishini lakho, le plugin ixhaswa kakuhle kwaye inetoni yeempawu.
Gravity Forms -Ukwakha ifom ekhawulezayo kunye nelula ngeendlela ezahlukeneyo zokucwangcisa ezidityaniswe ngokulula neenkonzo zomntu wesithathu njengePayPal, MailChimp, AWeber, kunye nabanye. Izongezo kunye ne-API ziyafumaneka ukuze ziphuculwe ukusebenza. Ukuba usebenzisa Umncedisi we-Pro, awuyidingi kuba iiFom ziluphawu lwayo.
Ukuqaqambisa nokwabelana -Iplagi yokuqaqambisa isicatshulwa kunye nokwabelana ngayo ngeTwitter nakuFacebook kunye nezinye iinkonzo kubandakanya iLinkedIn, i-imeyile, iXing, kunye neWhatsApp. Kukho ibhloko yeGutenberg eyakhelweyo eya kuvumela abasebenzisi bakho ukuba bacofe ukuze babelane.
OptinMonster -Yakha iifom zokungena kwiifom eziguqula iindwendwe zibe ngababhalisi kunye nabathengi. Khetha kwii-popups, imivalo yeenyawo ezihambayo, ii-slide-ins, kunye nabanye ukwenza ifom yakho yokungena kwimizuzwana engama-60.
jetpack -IJetpack iyaqhubeka nokuphucuka ngazo zombini iinguqulelo zasimahla nezihlawulelweyo ezandisa amandla kwiziko lakho leWordPress. Iimpawu ezimbini eziphambili endikholelwa ukuba zezokwabelana ngokwasentlalweni kwaye ubhalise ngokuphucula i-imeyile. Kukho itoni yezinye izinto, nangona! Eyona nto ilunge kakhulu, le iplagi iphuhliswa ngu-Automattic ukuze wazi ukuba ibhaliwe kwaye igcinwe ikwimigangatho ephezulu.
WooCommerce -Iqonga elaziwa kakhulu le-eCommerce lokwakha ivenkile ekwi-intanethi. IWoocommerce ixhaswe ngokupheleleyo ngetoni yokuphucula kunye neeplagi liqela eAutoattic, abaphuhlisi beWindowsPress.
Iiplagi ezigqwesileyo zeWordPress zokuphucula uLawulo lwakho lweWordPress
Ukukhangela okungcono ngokuTshintsha -Kukho amaxesha apho kuya kufuneka usebenzise ukukhangela / ukubuyisela kwindawo yogcino lwedatha yomxholo, amakhonkco, okanye ezinye iisetingi. Le iplagi lukhetho olukhulu lokwenza oko.
Khubaza amazwana -Izimvo bezidla ngokuba luncedo olukhulu kuzo zombini iindawo zokukhangela kunye nokubandakanya iindwendwe zesayithi yakho; kunjalo, kwiminyaka yakutshanje spamming izimvo sele phantse engalawulekiyo kwaye incoko iye yafudukela kumajelo eendaba zentlalo. Le plugin iya kuvala zonke iimpawu ezinxulumene nezimvo kwaye isuse amacandelo ezimvo ekubeni apapashwe kwindawo yakho. Unako nokucima zonke izimvo ezipapashiweyo.
Phindaphinda Post -ukuba ukhe wafuna ukuphinda umxholo wakho, le plugin ibonelela ngolawulo oluqinisekileyo lokuba yeyiphi indima enokuphinda umxholo, zeziphi izinto eziphindiweyo, kunye nokunye.
Umphathi weTag kaGoogle kwiWindowsPress -Ukulawula zonke izikripthi zakho ezongezelelweyo kunye nezinye izinto ezivela kuMphathi weTek kuGoogle. Le iplagi ikhethekileyo kwiWindowsPress kwaye inikezela ngetoni yokhetho.
Uluhlu lwePosti luboniswe kumfanekiso - yongeza Umfanekiso oPhakathi ikholamu kwizithuba zolawulo kunye noluhlu lwamaphepha. Ivumela abalawuli ukuba babone ukuba zeziphi izithuba okanye amaphepha aneseti yomfanekiso.
UkuFikelela kwiDrafti ekhawulezileyo - Ngaba ulawula iidrafti ezininzi? Ukuba kunjalo, le iplagin ibeka indlela emfutshane emfutshane kwimenyu yolawulo eya kukuzisa ngokuthe ngqo kuyilo lwakho (kunye nokubonisa ukubala).
Indawo yeSayithi kaGoogle Isisombululo sokumisa esinye sokuhambisa, ukulawula, kunye nokufumana ulwazi kwizixhobo ezibalulekileyo zikaGoogle ukwenza indawo iphumelele kwiwebhu. Inika ukuqonda okugunyazisiweyo, okuhlaziyiweyo kwiimveliso ezininzi zikaGoogle ngqo kwideshibhodi yeWordPress yokufikelela ngokulula, konke simahla.
Ukungena okwethutyana Ngaphandle Kwegama Lokugqithisa -kukho amaxesha apho ufuna ukubonelela ngomxholo okanye umphuhlisi weplagin ngokufikelela okwethutyana kumzekelo wakho we-WordPress… kodwa awunakuhamba kwinkqubo yokuba babhalise kwaye ufumane amagama ayimfihlo nge-imeyile. Le plugin ibonelela ngokuthe ngqo, ikhonkco lexeshana abanokuthi basebenzise ukungena kwindawo yakho ukukunceda. Uyakwazi ukuseta ixesha lokuphelelwa kwakhona.
I-WP Mail Log -Ukuba ukhe wazibuza ukuba ingaba ii-imeyile zithunyelwa ngaphandle kwendawo yakho nge-PHP okanye nge-SMTP, i-WP Mail Log Ngaba iplagi ebaluleke kakhulu yokulandela umyalezo wakho ophumayo.
WP Yonke Ukungenisa -Ingqokelela eguquguqukayo ngokumangalisayo yeeplagi zokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle idatha ukusuka kwiifayile ze-XML kunye ne-CSV ukungena nokuphuma kwi-WordPress kunye nenani leeplagi ezidumileyo.
Iiplagi ezigqwesileyo zeWordPress zokuLayout kunye noHlelo
Advanced Rich Text Tools for Gutenberg -Ukuba ufuna isitayile esongezelelweyo kumhleli weGutenberg ongagqibekanga ngeWordPress, kubandakanya ikhowudi, ubhaliso, iskripthi esikhulu, isicatshulwa esingaphakathi, kunye nokuhlelwa kombala ongasemva... le plugin ilula ibonelela ngazo zonke izinto
Umncedisi we-Pro -Umhleli wemveli weWordPress unokunqweneleka kwaye unokuba mhle kakhulu. I-Elementor ifike ngobudala kunye nomhleli omnandi weWYSIWYG, iifom, ukudityaniswa, ubeko, iitemplate, kunye nezinye iindlela ezinokukhethwa kunye neeplagi ezihamba nazo ukwandisa. Andiqinisekanga ukuba ndiza kuyakha indawo ngaphandle kwayo!
Iiplagi ezigqwesileyo zeWordPress zokunika amandla uMxholo wakho kunye nokuFikelela kwawo
IiNkalo eziPhucukileyo eziPhambili -Yenza kube lula kubalawuli, ababhali kunye nabahleli ukwenza ngokwezifiso iwebhusayithi yakho ngokwenza lula ulawulo lwayo. I-ACF ilula ukuyiphumeza kwaye iyenze ngokwezifiso kakhulu. Thenga izongezo ezinelayisensi ezongezelelekileyo zezinto ezintle.
I-ARVE Advanced Responsive Video Embedder -Iividiyo ezizinzisiweyo zinokuba yinto ebuhlungu yokugcina ulwakhiwo oluphendulayo kwindawo yakho. I-WordPress ngokwemveli ishumeka amaqonga amaninzi kodwa ayiqinisekisi ukuba ayaphendula.
Iifolthi zamaSahlulo zoLuntu ezilula -Ikuvumela ukuba wabelane, ubeke iliso kwaye unyuse itrafikhi yakho yentlalo ngokubulala ngokwezifiso kunye kubahlalutyi Iimbonakalo.
I-WP SMTP elula Ukuthumela izaziso zeWordPress, izilumkiso, kunye nee-imeyile ezizenzekelayo ezivela kumnikezeli wakho wokubamba zicela ingxaki. Sebenzisa i-SMTP ukuthumela i-imeyile ngomboneleli ngenkonzo ogunyazisiweyo kukhuseleke ngakumbi kwaye kuya kuba namathuba aphezulu okuhanjiswa. Sinamanqaku abonisa indlela yokusetha oku Uphando or Microsoft.
Isongezelelo -I-FeedPress iphatha ngokuzenzekelayo ulungiso lokondla kunye nokuhlaziya ukutya kwakho ngexesha lokwenyani ngalo lonke ixesha upapasha iposti entsha.
OneSignal - ukutyhala okushukumayo, ukutyhala kwewebhu, i-imeyile, kunye nemiyalezo yangaphakathi nohlelo Yazisa ababhalisile ngeposi nganye epapashiweyo.
Isidlali sePodcast Player Widget -Le yiwijethi endiyiphuhlisileyo eyaziwayo. Ukuba ubamba i-podcast yakho kwenye indawo, ungangena kwi-feed kwaye ufake ipodcast yakho kwibar esecaleni lakho okanye usebenzise ikhowudi emfutshane kwiphepha okanye ngeposi. Isebenzisa isidlali somsindo weWordPress's WordPress.
GTranslate -Sebenzisa le iplagi kunye nenkonzo ukuguqula ngokuzenzekelayo umxholo wakho kunye nokwenza indawo yakho yeWordPress ngokufikelela kuphando lwamanye amazwe.
Papasha kwiApple News -Yenza umxholo webhlog yakho ye-WordPress ukuba upapashwe kwisitishi seendaba se-Apple.
Kungekudala Yongeza iwijethi kwiinyawo zakho kunye nomxholo wakho wakutshanje ukubonelela ngekhonkco zangaphakathi kunye nokuzibandakanya. Le iplagi inetoni yokhetho lokwenza ngokwezifiso.
Ukuvuselela iZithuba eziDala -Kutheni usabelana ngesiqulatho sakho kube kanye xa unokwabelana ngesiqulatho esikhulu rhoqo…
Izithuba ezithandwayo zeWordPress Yongeza iwijethi kwiinyawo zakho kunye nomxholo wakho owaziwayo ukugcina umfutho kwezo zithuba kunye namaphepha. Le iplagi yakhiwa ngumbhali omnye kutshanje, kwaye ineetemplate ezithile ezakhelweyo ezilungele ukuhamba nazo!
WP PDF -Shumeka iiPDF ezisebenzisa iifowuni ngokulula kwiWordPress- kwaye unqande ababukeli bakho ekukhupheleni nasekuprinteni iifayile zakho zoqobo.
ProfilePress -I-WordPress okwangoku ikuvumela kuphela ukuba usebenzise ii-avatars zesiko ezilayishwe kuyo IGravatar. I-WP yomsebenzisi we-Avatar ikuvumela ukuba usebenzise nayiphi na ifoto efakwe kwilayibrari yakho yeendaba njenge-avatar.
Iiplagi ezigqwesileyo zeWordPress zokuSebenzisa iSayithi lakho leWordPress
Isikhulisi somfanekiso weKraken -Iyonyusa imifanekiso kunye nozipho kubhabho, ekuvumela ukuba wehlise ubungakanani bomfanekiso kunye namaxesha okulayisha ngaphandle kokuphulukana nomgangatho.
I-StackPath CDN -Fezekisa amaxesha akhawulezileyo omthwalo wephepha, ubeko olungcono lukaGoogle, kunye nokutshintsha okungakumbi ngeStackPath CDN. Ukuseta kulula kwaye kuthatha imizuzu kuphela.
SEO WordPress Inqanaba leMathematika sisixhobo se-SEO esingasasebenziyo esibandakanya uhlalutyo lomxholo kwiphepha, i-XML sitemaps, izityebi ezityebileyo, izikhokelo, ukubek'esweni okungama-404, kunye neetoni ezininzi. Inguqulelo yenkqubo inenkxaso engakholelekiyo yeziqwengana ezityebileyo, indawo ezininzi kunye nokunye. Eyona nto ibaluleke kakhulu, ikhowudi ibhalwe kakuhle kakuhle kwaye ayicothisi indawo yakho njengakwezinye iiplagi ze-WordPress ze-WordPress.
WP Rocket -Yenza umthwalo weWordPress ngokukhawuleza kunonqakrazo olumbalwa. Oku kwamkelwe njengeyona iplagi inamandla ye-caching ngamaNgcali eWindowsPress.
Eyona Plugin yeWordPress yeCookie kunye nokuThotyelwa kweDatha
Njengeshishini, kuya kufuneka uthobele imimiselo yamazwe aphesheya, yomanyano kunye neyorhulumente elawula indlela oyilanda ngayo kunye nokugcina idatha yeendwendwe zakho. Ndisebenzisa iwijethi yeJetpack kwiimvume zecookie, kodwa yayihlala ilayisha ngaphezulu kwesinye kwaye yayingenakho ukhetho lokwenza ngokwezifiso.
Imvume ye-GDPR Cookie (CCPA Ready) -I-GDPR Cookie Consent plugin iyakukunceda ekwenzeni iwebhusayithi yakho i-GDPR (RGPD, DSVGO) ihambelane. Ukongeza ekuthobeleni le plugin ye-GDPR ye-WordPress ikwaxhasa ukuthotyelwa kwecookie ngokungqinelana ne-LGPD yeBrazil kunye neCarlifonia Umthetho wabucala wabathengi (CCPA) ongummiselo welizwe ojolise ekuphuculeni amalungelo abucala kunye nokukhuselwa kwabathengi kubahlali baseCalifornia.
Iiplagi ezigqwesileyo zeWordPress zokukhusela isiza sakho seWordPress
Akismet IWordPress 'iplagi eyaziwayo kakhulu, iAkismet yeyona ndlela ilungileyo emhlabeni yokukhusela ibhlog yakho kwizimvo nakwindlela yokulandela umkhondo yogaxekile. Sukuyifaka nje, xela ezo jerks!
VaultPress -Khusela umxholo wakho, imixholo, iiplagi, kunye noseto ngokugcina ixesha lokwenyani kunye nokuskena okuzenzekelayo kokhuseleko.
Umsebenzi weWP Log -Eyona nto ibanzi ye-WordPress iplagi yokungena yokugcina irekhodi yotshintsho lwabasebenzisi, lula ukulungisa ingxaki, kwaye uchonge indlela yokuziphatha ekrokrisayo kwangethuba ukuthintela ii-hacks ezikhohlakeleyo. Ukuba ubhalisela Ukhuseleko lweJetpack or Jetpack Professional ufumana iLog yoMsebenzi ebanzi ngokunjalo.
Ngaba ufuna iiplagi ezingakumbi?
Kukho ezinye iiplagi ezigqwesileyo, ezihlawulelweyo ezixhaswa ngokupheleleyo Umxholo webali awuyi kufumana kwenye indawo. Inkampani yabazali, i-Envato, yenza umsebenzi omkhulu wokuqinisekisa ukuba iiplagi ziyaxhaswa kwaye zihlaziywa rhoqo.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa Iikhowudi ezihambelana nazo kuyo yonke le post, nceda uxhase upapasho lwam ngokunqakraza kwaye uthenge kubo!
tags: Akismetiiplagi ezilungileyoeyona Wordpress pluginsiiplagi zeshishini zamagama oshishinoccpaCdniplagi yokuthobelainqubomgomo yekhukhiizithuba eziphindwe kabiniiiplagi ezizithandayoiiplagi ezizithandayo ze-wordpressgdprIkhithi yendawo kaGooglegutenbergUmdlali wepodcastI-PubSubHubbubukufikelela kuyilo ngokukhawulezaisikhundla sezibaloulungelelwanisoukuhlela okubhaliweyo okutyebileyoindlela yokumaiiplagi zewijethiwidgetsWordPressilogu yophicotho lwegamaiplagi yogcino yogcinoI-wordpress cdnIgama le-cdn iplagiIplagi ye-ecommerce ye-wordpressIifayile zefayile iplagiiiplagi zegamaI-plugin ye-podcast yegamaIgama lefayile smtp iplagiI-plugin yesabelo sentlalontlewp irokethi
Indlela yokukhetha iNkqubo-sikhokelo yaBantu bakho boMthengi
I-TaskHuman: Iqonga loQeqesho lweDijithali yexesha lokwenyani
NgoJanuwari 5, 2015 ngo-11:21 PM
Uluhlu olukhulu kunye ne-infographic. Njengesiqhelo, ezinye ezindala, iintandokazi eziqhelekileyo kunye nezinye ezintsha kuza kufuneka ndiphume! Enkoso ngokwabelana.
NgoJanuwari 6, 2015 ngo-1:53 PM
Juni 28, 2015 ngo-11: 34 PM
Andazi ukuba unokuthi naliphi na eli phepha liyafundeka? Kwafuneka ndiskrole embindini ukuze ndifumane into yokufunda emva koko yayingafanelanga. Ukuba ucinga ukuba iphepha elisecaleni le-3/4 lamaqhosha anemibala eqaqambileyo kunye ne-pop up ehlala indicaphukisa kukuthengisa ishishini, ngoko uphulukene nayo. Ndikhe ndazihlupha ngokubhala le nto ukuze ndibenento nawe, njengokuba unjalo nam. Kwaye loo nto yi-CUT kwi-CHASE. Mhlawumbi isikolo esidala kunye neteknoloji yewebhusayithi ngokuqinisekileyo ihamba ngesantya. Kodwa ngokuqinisekileyo ukuthengisa kumalunga nokwakha abafowunelwa beshishini kunye nokufumana ulwazi kubakhuphiswano bakho? Ayinondothusa ukuba uninzi lomfundi wakho aluboni umbala. Ngokuqinisekileyo ndihamba ngaloo ndlela.
Juni 29, 2015 ngo-12: 31 PM
Enkosi ngempendulo, Steve. Sinikezela ngomxholo apha ngaphandle kweendleko kuwe kwaye ukufunda kwethu kunyuke amanani aphindwe kabini iminyaka emininzi. Ndizimisele ukuqhubeka nokusebenza kwicala labalandeli bethu, abathengisi bethu, kunye nabaxhasi bethu. Ukuqenelela okuhle kakhulu.
NgoJulayi 9, 2015 ngo-9:48 PM
Molo Douglas! Ibhlog enomdla onayo apha. Uncedo olukhulu. Enkosi.
NgoJulayi 10, 2015 ngo-12:21 PM
Enkosi! Kwaye wamkelekile!